विश्वको सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको शहर, जहाँ २ जना मात्र मान्छे बस्छन् ! - Sagarmatha Online News Portal
विश्वको सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको शहर, जहाँ २ जना मात्र मान्छे बस्छन् !
एजेन्सी । विश्वको सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको शहर अमेरिकाको ड्याकोटा राज्यको उत्तरी भागमा रहेको छ । जहाँ २ जना मात्र मानिस बसोबास गर्दछन् । तर, पछिल्लो समय केहि आश पलाएको छ । उक्त शहरको जनसंख्या बढेर ४ जना पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लामो समयदेखि शहरको मेयर रहेका व्यक्तिको निधन भएसँगै शहरको अस्तित्व नै लोप हुने जोखिम बढेको थियो । रुजोस्थित म्याकलिन काउन्टीका मेयर ८६ वर्षीय ब्रुस लोरेन्जको गत जुलाईमा निधन भएको थियो । उनको निधन भएसँगै उक्त सहरको अस्तित्व नै लोप हुने जोखिम बढेको थियो । किनकी कुनै सहरको अस्तित्व कायम राख्नका लागि न्यूनतम जनसंख्या ३ जना हुनुपर्ने रहेछ ।
सहरमा अहिले लाउरिन्डा रोलोसन र उनका पती टेरी रोलोसन मात्र बस्दछन् । उनका अनुसार अहिले उक्त शहरको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि योग्य एकजना अर्का व्यक्ति फेला परेका छन् । ग्रेग स्कमाल्ज नामका व्यक्तिसँग रुसो शहरको पोष्ट बक्स नम्बर रहनुका साथै कुखुरा र घोडा फार्म हेर्नका लागि हरेक दिन शहरमा आउने गर्दछन् । त्यसैले उनलाई शहरको नागरिकता प्रदान गरी मेयर बनाउने तयारी गरिएको छ ।
ग्रेग र उनकी पत्नी मिचेल हाल भेल्भा उक्त शहरमा बस्दछन् । तर उनीहरु यही वर्ष रुजो शहरमा बसाइँ सर्ने तयारीमा छन् । रुजोमा उनीहरुले आफ्नो घर निर्माण गरिरहेका छन् । यो जाडो सिजन अघि आवास निर्माणको काम सकिने उनले बताए । रुजो शहर सन् १९०९ मा स्थापना हुँदा त्यहाँ १ सय ४१ जनसंख्या थियो । तर, सन् १९५६ पछि यो शहरको जनसंख्या स्वात्तै घट्न थाल्यो । अन्नमिल बन्द भएसँगै यहाँका मानिसहरु बसाई सर्न थालेका थिए । आफूसँगै आसपासका अरु मानिसहरु पनि रुजो शहरमा बसाई सर्ने आशा ग्रेगले गरेका छन् । ग्रेगको अस्तित्व बचाउन आफू लागिपर्ने उनले बताए ।
Published On: २३ भाद्र २०७५, शनिबार 556पटक हेरिएको
वडा अध्यक्षको चर्तिकला : अर्काकी श्रीमतीसँग शारीरिक सम्पर्क गर्दागर्दै रंगेहात पक्राउ !